२८ प्रतिशतले बढ्यो बैंकहरुको बिजेनस, कसले कति बढाए? :: Setopati
मंगलबार, असोज ५, २०७८
२८ प्रतिशतले बढ्यो बैंकहरुको बिजेनस, कसले कति बढाए?
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, साउन ४
कोरोनाको असरका वावजुत वाणिज्य बैंकहरुले एक वर्षको अवधिमा २८ प्रतिशतले आफ्नो बिजनेस बढाएका छन्।
बैंकहरुको मुल बिजनेस भनेकै कर्जा प्रवाह हो। २०७७ असार मसान्तसम्म २७ वाणिज्य बैंकहरुले २९ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए भने २०७८ असार मसान्तसम्म आउँदा ३७ खर्ब २० अर्ब पुगेको छ। अर्थात एक वर्षमा ८ खर्ब १५ अर्ब थप कर्जा विस्तार भएको छ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुसँग मर्ज र एक्वीजिसन गरेका कारण पनि वाणिज्य बैंकहरुको यो पटक बिजनेस विस्तार राम्रो देखिएको हो। मर्ज र एक्वीजिसनकै कारण केही बैंकहरुको बिजनेस रफ्तार उच्च देखिन्छ।
एक वर्षको अवधिमा बैंकहरुको बिजनेस ७ प्रतिशतदेखि ५६ प्रतिशतसम्म बढेको छ। एसबिआई बैंकको विजनेस विस्तार तुलनात्मक रुपमा कमजोर अर्थात ७ प्रतिशत मात्रै छ भने सिभिल बैंकको बिजनेस ५६ प्रतिशतले बढेको छ।
बिजनेसका आधारमा एनआइसी एसिया बैंक सबैभन्दा ठूलो देखिएको छ। बैंकले असार मसान्तसम्म २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ।
बैंकहरुको कर्जा वृद्धिदर निक्षेपको वृद्धिदर भन्दा धेरै हो। सोही एक वर्षको अवधिमा बैंकहरुको निक्षेप भने २० प्रतिशतले बढेको छ।
०७७ असार मसान्तसम्म ३४ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका बैंकले ०७८ असार मसान्तसम्म ४२ खर्ब १ अर्ब संकलन गरेका छन्। निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धिदर उच्च भएकै कारण केही बैंकको सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशत नाघेको छ।
असार मसान्तसम्म सिभिल, कुमारी, माछापुच्छ्रे, मेगा, एनआइसी एसिया, सानिमा, सिद्धार्थ र सनराइज बैंकको सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा माथि छ। यस्तो सिसिडी रेसियोमा राष्ट्र बैंकले ८५ प्रतिशतको सीमा तोकेको छ।
यसको अर्थ बैंकहरुको मुल पुँजी र संकलन भएको निक्षेपमा ८५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउनु हो। निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा प्रवाह बढी हुँदा सिसिडी रेसियो बढ्ने गर्छ।
हेर्नुस् कुन बैंकले कति बढाए बिजनेस?
कर्जा असार ०७७ (रूपैयाँमा)
कर्जा असार ०७८ (रूपैयाँमा)
अन्तर दर (प्रतिशतमा)
१ खर्ब २३ अर्ब
१ खर्ब ५१ अर्ब
बैंक अफ काठमाण्डु
१ खर्ब १८ अर्ब
१ खर्ब ३४ अर्ब
१ खर्ब ९९ अर्ब
२ खर्ब ४२ अर्ब
१ खर्ब ७ अर्ब
१ खर्ब ३२ अर्ब
१ खर्ब १५ अर्ब
१ खर्ब ४३ अर्ब
१ खर्ब ८ अर्ब
१ खर्ब १६ अर्बं
१ खर्ब १३ अर्ब
१ खर्ब ४१ अर्ब
१ खर्ब ५३ अर्ब
२ खर्ब ५ अर्ब
१ खर्ब ४४ अर्ब
१ खर्ब ६७ अर्ब
१ खर्ब ७३ अर्ब
२ खर्ब ६४ अर्ब
१ खर्ब २१ अर्ब
१ खर्ब ५८ अर्ब
१ खर्ब १ अर्ब
१ खर्ब ३ अर्ब
१ खर्ब ४२ अर्ब
१ खर्ब १४ अर्ब
१ खर्ब ५६ अर्ब
१ खर्ब २२ अर्ब
१ खर्ब २७ अर्ब
१ खर्ब ६५ अर्ब
२९ खर्ब ५ अर्ब
३७ खर्ब २० अर्ब
स्राेत: नेपाल बैंकर्स एसाेसिएसन
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ४, २०७८, १८:४०:००
ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन- सर्वोच्चमा सेटिङको गलत र घातक अभ्यास सुरू भयो
संविधानमा प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलासको परिकल्पना छैन : सर्वोच्च
अपराधबाट पीडित परिवारको गुनासो सुन्न मोरङमा घर-घरमा प्रहरी परिचालन
नेपाली खेलाडीलाई एक्सपोजरको खाँचो छ– प्रशिक्षक डेभ ह्वाटमोर (भिडिओ)
ईश्वर पोखरेलको प्रतिवेदन : माधव नेपाल समूह बाहिरिएपछि पनि गुटबन्दीको स्वतः अन्त्य हुने छैन
जमानतमा छुटे शिल्पा शेट्टीका श्रीमान राज कुन्द्रा
रोहिंग्या शरणार्थीलाई बेचबिखन गरी काठमाडौं ल्याएको आरोपमा तीन विदेशी पक्राउ
ललितपुरको ढोलाहिटीमा सानिमा बैंकको शाखा कार्यालय
सेयर बजारमा 'बियरिस सेन्टिमेन्ट', कतिसम्म घट्ला?
आहा, नयाँ नोट! (तस्बिरहरू)
सोमबारदेखि नयाँ नोट साट्न पाइने
यादमै सीमित मेरी आमा सुरेश पोख्रेल
अब रित्तै रहन देऊ ध्रुव गौतम
चिसो बतास सरु शर्मा
कवि श्रवण मुकारुङको कविता– ‘हे कालीगण्डकी’ श्रवण मुकारुङ
जनताको सिंहदरबार शोभाकान्त गौडेल